WONDERFUL UNIVERSE: "မိုးမိသွားသော ရေ နည်း ငါး "
"မိုးမိသွားသော ရေ နည်း ငါး "
“မိုးမိသွားသော ရေ နည်း ငါး”မနေ့ညလယ်လောက်က မိုးတော်တော်ရွာထားသဖြင့် တောင်ကျစမ်းချောင်းတလျောက်မှာရှိတဲ့ ဇလုပ် (ရုတ်တရက်နိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ ရေစီးကြောင်းမှ ချိုင့်) တွေမှာ ဗြုံးတွေတော်တော်လေး တင်ကျန်နေရစ်မှာသေချာသည်။ဒီလိုနေ့မျိုး ဖိုးချို အရမ်းပျော်သည်။ ဇလုပ်တစ်ခုကို ဗုဒ္ဓေါ (ဝါးဖြင့်ရက်ထားသော ကျောက်ဆေးဇကာ) လေးငါးဇကာလောက်ရနိုင်သည်။ ခါတိုင်းလို တနေကုန်အောင်အဝေးကြီးလျောက်ပြီး ဗုဒ္ဓေါ ဆေးစရာမလိုတော့။မိုးအေးနေလို့ထင်သည်။ ခါတိုင်းလို ဗြုံးလုဆေးမဲ့ ရွယ်တူကလေးတွေလဲမရှိသဖြင့် စိတ်ကြိုက် တစ်ယောက်ထဲ ဆေးနေရုံသာ။ တောင်စောင်းတလျောက်ဖြတ်စီးလာသော သည်စမ်းချောင်းလေးက သူတို့ မြေးအဖွားအတွက်အတော်အသင့် ဝမ်းစာဖြေရှင်းပေးနေနိုင်ခဲ့သည်။ ညကမိုးကြောင့် စမ်းချောင်းမှ ရေတို့ လက္ဘက်ရည်ရောင်ဖြစ်နေ၏။ ဆောင်းတွင်းက ဝါထိန်နေအောင်ပွင့်ခဲ့သော တောင်နေကြာတို့ အစား တံမြက်စည်းပင်တို့ အပြိုင်းအရိုင်းမင်းမူနေသည်။ဝတ်ထားသောစစ်အင်္ကျီပွပွအောက်ပိုင်း ရေစိုနေရာကို လုံးပြီးရေညှစ်လိုက်ကာ ဇလုပ်ထဲမှ လက်ကျန်ဗြုံးကို နှိုက်ကာ ဗုဒ္ဓေါထဲ သဲ့ယူလိုက်သည်။ ဒီတဝိုင်းဆေးပြီးလျှင် ဇလုပ်မှာ လက်ကျန်ဗြုံး မရှိတော့ နောက်ဇလုပ်တခုပြောင်းရမည်။ငါးမူးတင်အညံ့ပန်း လေးငါးပွင့်သာ ရသေးသည်။ နောက်ဆုံးဇကာ လှည့်ပြီးတော့လဲ ကလပ်တင် (မိုးကုတ်တွင်းထွက်များ ရတီနှင့်မတွက်ပါ) မျောတပွင့်သာပါသည် (အဖြူရောင်ကျောက်)။ ထိုမျောမှာလဲ အခိုးသာပါပြီး ကြိုးမပါတော့ အသုံးမတည့်လှ။ သူသက်ပြင်းချရင်း ဇကာမှောက်ထားတဲ့ သဲပွင့်တွေပေါ် ထိုင်ချလိုက်သည်။“ဝေ့ ...လျှိုအောက်ကဖိုးချိုလား” မောမောနှင့်ထိုင်နေရင်း တောင်အီအီစဉ်းစားနေခိုက် တောင်စောင်းပေါ်မှ အော်ခေါ်သံကြောင့် မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ရှမ်းသံဝဲဝဲနှင့် ကုန်းဆင်းလေးအတိုင်းဆင်းလာသော ကိုကြီးစိုင်းပီ ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။“ကြိုးစားလှချည့်လား ဖိုးချိုရဲ့ နေတောင်ကောင်းကောင်းမထွက်သေးဘူး”“တတ်နိုင်ဘူး ကိုကြီးရာ အဖွားက ဈေးမထွက်နိုင်ဘူး ညကလဲ မိုးကြမ်းထားတော့ သူများ လုပ်ကွက်တွေက ဗြုံးတွေပိုပြီး ပါလာမှာပဲဆိုပြီး စောစောထွက်လာတာ...လုဆေးစရာလဲမလိုတော့ဘူးပေါ့”“မင်းဆေးထားတာ တော်တော်များနေပြီပဲ ဘာတွေရပြီလဲ” သူဆေးထားသော သဲဖတ်ပုံကြည့်ရင်း ကိုကြီးစိုင်းပီ သူ့ဘေးဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ပြန့်ပြန့်လေးဖြစ်နေသောကျောက်တုံးပြားပေါ်တင်ထားသည့် ကျောက်ပွင့်လေးများကို မေးဆတ်ပြရင်း“ဒါပဲရသေးတယ် ကိုကြီးရာ..ထာပွဲ အမှီ ထမင်းစားကျောက် အစင်လေးတပွင့်လောက် ရချင်တယ် ။ အဖွားက မနေ့ညက တညလုံးချောင်းတွေဆိုးနေတာ” (ကျောက်အရောင်းအဝယ်လုပ်သည့် ဌာနပွဲ ကို ထာပွဲဟုခေါ်သည်)“အင်း...ငါလဲ ညနေကျရင် မင်းတို့တဲဖက်လာခဲ့ပါဦးမယ်ကွာ” ကိုကြီးစိုင်းပီ သက်ပြင်းချလိုက်သံ သူကြားဖြစ်အောင်ကြားလိုက်၏ ။“ကိုကြီး ဘယ်အချိန်လောက် ပြန်မှာလဲ”“ဘာလဲ မင်းအတွက် မြက်တစီး ပိုဖြတ်ထားပေးရမှာလား...အေးပါကွာ မင်းအဆင်မပြေတော့ တောင်စောင်းဖက်တက်လာပေါ့..လုပ်လုပ်..မင်းဗြုံးဆက်ဆေးနေ ငါမြက်ဆက်ဖြတ်လိုက်ဦးမယ်”စကားဆုံးတော့ ကိုကြီးစိုင်းပီ ထိုင်နေရာမှထပြီး တောင်စောင်းပေါ်ပြန်တက်သွားသည်။ တကယ်လို့ ကျောက်မပွင့်လဲ ကိုကြီး ဖြတ်စည်းထားတဲ့ မြက် (နွားစားတဲ့မြက်မဟုတ်ပါ...လေးပင်တွင်းတူးရာတွင် နံရံမှ ကြံဖတ်မြေကြီးများ ကွာမကျအောင် သစ်သား၊ဝါးတို့ကြားတွင် ကပ်ပြီးညှပ်ရသော၊ ရေထိလျင် အလွယ်တကူမပုပ် မဆွေးသောသစ်ရွက်) တစ်စည်းထမ်းကူလျှင် ဆန်တစ်ဘူးစာလောက်တော့ရမည်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် တွင်းပစ္စည်းများရောင်းသော ကိုကြီးက သူ့တနိုင်အတွက် တန်ရာတန်ကြေးထက် ပိုပေးမှန်းသူသိသည်။ဖိုးချို ကိုကြီးစိုင်းပီကိုချစ်သည်။ ဘယ်လိုမှ မတော်စပ်ပါပဲနှင့် သူ လူမှန်းသိကတည်းက အတန်အသင့် ပြေလည်သော ကိုကြီးစိုင်းပီက သူတို့မြေးအဘွားကို တတ်နိုင်သမျှ ကြည့်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတရံ သူ့နှင့်ရွယ်တူ ကောင်လေးတွေဝိုင်း အနိုင်ကျင့်လျှင်လဲ သူ့ဖက်ကရပ်တည်ပေးသူမှာ ကိုကြီးစိုင်းပီ တစ်ယောက်ထဲသာရှိသည်..။ အဖွားပြောပြောနေတတ်သည့် သူ့ဘဝက ရေနည်းငါး တစ်ကောင်သာသာ။ အမှန်တော့ ဆိုလိုရင်းကို အတိအကျသူမသိ ။သိလောက်အောင်လဲ အတန်းစာလောက်လောက်ငှငှသူမသင်ခဲ့ရ။ ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းမောချလိုက်ရင်း စမ်းချောင်းအထက်ဖက် နောက်တနေရာပြောင်း ဖို့သူပြင်လိုက်သည်။ နေရောင်က မြူတွေကြားက ခုထက်ထိရုန်းမထွက်နိုင်သေး။.........ဖိုးချိုတို့အရင်အိမ်က မိုးကုတ်မြို့၏ အစွန်ဆုံးရပ်ကွက် မိုးမိတ်အထွက် ကာလမ်းဘေးက လည်ဦး ကျေးရွာအပိုင် ကြေးနီတောင်အောက်ခြေမှာဖြစ်သည်။ ဖိုးချိုအဖေက သပိတ်ကျင်းဇာတိ၊ မိုးကုတ်မှာကျောက်လာတူးရင်း ဖိုးချိုအမေနှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး မိုးကုတ်မှာပဲ နေဖြစ်ရင်း သူ့ကိုမွေးခဲ့သည်။ တနယ်သား အဖေက ကျောက်တွင်းမှ ရသော အောက်ကျောက်လေးများ ထာပွဲတွင်ရောင်းရင်း ထာပွဲ အရောင်းအဝယ်ထွက်သည့်အမေနှင့်ဆုံပြီး ညားခဲ့ကြသည်ဟု အဖွားပြော၍ သိခဲ့ရသည်။ သူငယ်ငယ်က အမေ ထာပွဲကပြန်လာလျှင် သူ့အတွက် စားစရာတစ်ခုခုတော့ပါလာမြဲ။ အမေကိုင်သော ကျောက် က အစပ်ထုပ် (တစ်ကာရက် လေးပွင့် ၊ ငါးပွင့် ရှိ အောက်အရပ်သုံး ခြယ်ကျောက်)။ စားသောက်ဖို့ လောက်ငှရုံသာ အမြတ်ရ၏။ သူဌေးဖြစ်ဖို့ အဖေ့ တွင်းလုပ်နေခြင်းအပေါ်သာ မရေမရာ အားထားနေရသည်။ အဖေက အဖွား(အမေ့ အမေ ) အပါအဝင် သူတို့မိသားစုအပေါ် ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်ရှာဖွေကြွေးခဲ့သည်။ အဖေ သူ ၆ နှစ်သားလောက်မှာ ကျောက်တခါအောင်တော့ ရွာထိပ်နာကအိမ်လေး ဝယ်ပြီး အခြေချခဲ့သည်။ အမေ ကလဲ အရင်းအနှီးရှိလာတော့ တဆင့်တက်ပြီး ပွင့်ကောက်(ကလပ်တင်ကျောက်) ကိုင်သည်။လူမှန်းသိတတ်စ ဖိုးချိုဘဝက အစစအရာရာအဆင်ပြေနေခဲ့သည်။ မိသားစု ပျော်ရွင်စရာဘဝလေး ခုချိန်ထိသူမှတ်မိနေဆဲပါ။မိုးတွေးသဲသဲမဲမဲရွာတဲ့ ညတစ်ည ဖိုးချိုရင်ထဲ ဒီနေ့ထက်ထိ ဘယ်လိုမှမေ့မရ။နုနုနယ်နယ် သူ့နှလုံးသားထဲ ခုထက်တိုင်စွဲနေတုန်းလေ...။ အဖေ ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတာ မယုံချင်သေး၍ ရပ်ကွက် လမ်း ကွေ့ကောက်ကောက်ကို အထက်စီးမှ မြင်ရသည့် ဥမင်ရေထွက် တောင်စောင်းပေါ် ၁၁နှစ်သား အရွယ် ခုချိန်ထိ တက်မျှော်နေတတ်တုန်း။ စိန်နားပန် ချုံတော စပ်က တောင်စောင်းမှာ အကြာကြီး ထိုင်စောင့်နေမိတတ်သည်။ လေတွေတိုက် မိုးတွေ တဖွဲဖွဲကျပြီး နုတ်ခမ်းတွေ ပြာလာတဲ့အထိ အအေးဒဏ်ကို ကြိတ်မှိတ်ခံရင်း အဖေ့ကိုမျှော်ရသည်က ဖိုးချို ရဲ့ အလုပ်တခု။ အဖွားဖြစ်ဖြစ် ကိုကြီးစိုင်းပိ ဖြစ်ဖြစ် လိုက်ခေါ်မှ အိမ်ပြန်ဖြစ်တာ သူ့ဘဝရဲ့ ရေးစရာမလိုတဲ့ မိုးတွင်းမှတ်တမ်း။ဓတ်တော်တောင်မှာ တောင်ပြိုပြီး တွင်းပိ သေသွားတဲ့လူ ၂၀၀ ကျော်ထဲမှာ အဖေတစ်ယောက်လဲ ကံဆိုးစွာ ပါသွားခဲ့သည်တဲ့။အဖေဆုံးပြီး တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာတင် ဖိုးချိုတို့အိမ်ရဲ့ အခြေအနေက တော်တော်လေးယိုင်လာသည်။ အမေ ခါတိုင်းလို ထာပွဲအပြန် ဝယ်လာသော သူ့အတွက်မုန့်တွေက ရက်ခြားလာသလို အရေအတွက် နဲနဲလာသည်။ ဒီကြားထဲ အဖွားကပါလူကြီးရောဂါနှင့် တရှောင်ရှောင်။ နောက်ဆုံးအဖြေက သူ ၃ တန်းနဲ့ ကျောင်းထွက်လိုက်ရသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲသည်ကာလတွေမှာ ညနေ အမေအပြန်ကို တောင်စောင်းလေးပေါ်က သူတက်စောင့်နေခဲ့ သည်။.........မှတ်မှတ်ရရ မိုးတွေရွာနေတဲ့ တညနေမှာပဲ အိမ်ဘေးအိမ်က လီရှောမကြီးက အဖွားဆီလာပြီး အမေ မန္တလေးဆင်းရင်း နောက်ယောင်္ကျားယူသွားပြီ ဟုသတင်းလာပေးသဖြင့် ဖိုးချိုမီးဖိုချောင်ထဲ ဆန်ဆေးနေရင်း အဖွားနှင့် လီရှောမကြီးတို့ ပြောနေတာတွေကို ကြားနေရသည်။ လီရှောမကြီးထွက်သွားတော့ အဖွား အိမ်ရှေ့က မီးပုံဘေးမှာ ငိုင်နေရင်း မျက်ရည်တွေ ကျနေသည်ကို သူ မီးဖိုချောင်ပေါက်မှ ရပ်ကြည့်နေမိသည်။ အဖွားရိူက်နေတာ အတော်ကြာတော့ အဖွားကို သနားပြီး၊ အဖွားကို နောက်ကျောမှဖက်ရင်း“အဖွားရယ် ငိုမနေပါနဲ့ အမေ နောက်ယောင်္ကျားယူသွားလဲ သားတို့နဲ့ အတူတူပြန်လာနေမှာပဲဟာ” ဟု ကလေးအတွေးနဲ့ ပြောခဲ့တော့ နောက်ဖက်မှ ဖိုးချိုကိုလှည့်ပြီး ရင်ခွင်ထဲပိုက်ပွေ့ရင်း “သားအမေဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး” ဟူသောစကား ပြောခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း အဖွား အမေ့အကြောင်း လုံးဝမပြောတော့။ဖိုးချိုမှာသာ အဖေနှင့် အမေ ပြန်လာတာ မျှော်နေကျဖြစ်သည့် တောင်စောင်းလေးပေါ် တက်တက်ပြီး မျှော်နေတတ်သည်။ အမေထွက်သွားပြီး ၆ လလောက်နေတော့ အဆင်မပြေတာနဲ့ အဖေအမေတို့နှင့် အတူနေခဲ့တဲ့ အိမ်လေးကိုရောင်းပြီး အဖွားနှင့်သူ တောင်ယာခင်းစပ်နားကေ တာလေးထဲမှာ တဲထိုးပြီးနေလာခဲ့တာ သူဒီအရွယ်ထိပါပဲ။ အိမ်ပြောင်းတော့ “သားတို့ဒီအိမ်မှာမနေရတော့ဘူးပေါ့နော်” ဟုသူပြောတော့ အဖွားက သူ့ခေါင်းလေးကို အသာပွတ်နေခဲ့သည်။ယာခင်းနားက တဲလေးမှာနေရင်း ထမင်းတစ်လုပ်အတွက် အဖွားက သူများယာထွက်သီးနှံတွေ ရောင်းရင်း သူ့ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။သူ ၁၀နှစ်သားရောက်တော့ အဖွားပင်ပန်းသည့်ဒဏ် မခံနိုင်တော့၍လား၊ အသက်အရွယ်ကြောင့်လား မသိ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်လာသည်။ အဖွား ဈေးရောင်းထွက်လိုက် မထွက်လိုက် ဖြစ်လာတော့ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းလာတာ သိသာလာသည်။ ထို့ကြောင့် သူငွေရှာမှဖြစ်တော့မည်။ ရွာထဲက သူ့ထက်ကြီးသော ကလေးတွေ ဥမင်ရေထွက် တောင်ပေါ်တက်ပြီး ကျောက်သွားဆေးကြတာ၊ အနဲဆုံးတော့ ထမင်းစားကျောက်လောက်ရနေကြတာ၊ ဟိုတလောက ရွာထဲက ဖိုးသားဆိုသောကောင်လေး ဗုဒ္ဓေါဆေးရင်း သိန်းကျောက်တစ်ပွင့် ရသွားတာ သူသိရသည်။ အဖွားပြောတဲ့ စကားအရ မိုးကုတ်က ထွက်တဲ့ ကျောက်တွေထဲမှာ ဒီဥမင်ရေထွက်က ထွက်တဲ့ကျောက်က ကျောက်သားအကောင်းဆုံး။ ဒါပေမဲ့ ကျောက်ဘယ်လောက်သေးသေး ဂေါ် သို့မဟုတ် ဂေါ်ကြိုး (ကျောက်သားထဲမှာပါသော အဖြူရောင်အနှစ်၊ ကြယ်ပုံစံပြေးနေသောကြိုး) ပါနေတတ်သည်တဲ့။ အမှန်က သူ ဇကာ မလှည့်တတ်ပါ၊ အဖွားပြောတော့ ဆန်ရွေးတဲ့အခါ စကောလှည့်တာနဲ့ တူတယ်၊ သာမန်သဲ ကျောက်စရစ်ခဲတွေထက် လေးတဲ့ ကျောက်တွေက ဇကာအလယ်အောက်ခြေမှာလှည့်ပါများတော့ စုစုလာပြီး ဇကာပြောင်းပြန်လှန်ပြီး မှောက်ချလိုက်တဲ့အခါ အလယ်အပေါ်ဆုံးမှာ ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ တပတ်ကျော်လောက်ကြာတော့ သူ လက်အလိုက်သင့်ပြီး ကောင်းကောင်းတတ်လာသည်။ ခြေထောက်မှာ ကနယ်(ရွံ့စေး) ကိုက်ပြီး တနေကုန် ခါးကုန်း ဇကာလှည့်နေရသောကြောင့် ခါးနာတာကလွဲ၍ ထမင်းစားကျောက်ပင်မရခဲ့။ ဒါကလဲ သူများတွေ ဆေးတဲ့အောက်ပိုင်းမှာ လုပ်လို့လဲဖြစ်နိုင်သည်။အဖွား ချောင်းတွေဆိုးပြီး အိပ်ရာထဲလဲနေတဲ့ ရက်မှာ သူ မနက်အစောကြီးထပြီး တွင်းတော (ကျောက်တူးသည့်လုပ်ကွက်) အပေါ်ဖက် တောင်တဝက်လောက်အထိ တက်ပြီး ကျောက်ဆေးတော့ နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာတင် ပန်းရည်တက် ကျောက်လေး ၃ပွင့် ရခဲ့သည်။ သူအပြန်လမ်းမှာ ကျောက်လိုက်ကောက်တဲ့ အမကြီး၂ယောက်နဲ့တွေ့တော့ ရောင်းလိုက်တာ တစ်ထောင်ကျော်ကျော် ရသည်။ ကျောက်ရောင်းရသော ငွေလေး တစ်ထောင်ကျော်ကို အဖွားလက်ထဲ အပ်ရသောနေ့က သူအလွန်ပျော်ခဲ့သည်။ အဖွားကိုလည်း ပြန်လုပ်ကျွေးလို့ရပြီဟု တွေးရင်း သူပျော်နေခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူတို့မြေးအဖွားရဲ့ စားဝတ်နေရေးက သူ့အပေါ် လုံးလုံးမဟုတ်တောင် ခပ်များများ ရောက်လာခဲ့သည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုကြီးစိုင်းပီက အဲသည်နေ့ညမှာ အိမ်ကို ခေါပုတ်ကင်လာပို့ရင်း သူကျောက်ရတာသိသွားတော့ ကျောက်အရွယ်အစား အရည်ပုံစံတွေမေးပြီး ဒေါသတွေထွက်နေသည်။" တောက်...နားမလည်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ..ဖိုးချို နောက်ဘာပဲရရ ကိုကြီးကိုလာပြ ကိုကြီးရောင်းပေးမယ်"“ဟုတ် ကိုကြီး” ဘာဖြစ်ဖြစ် သူပျော်နေခဲ့တာသေချာသည်။........ဖိုးချို တောင်စောင်းလေးပေါ်မှ ဆင်းလာတော့ နေလုံးကြီးကအနောက်ဖက်တောင်ထိပ်မှာမေးတင်နေလေပြီ။ ဒီနေ့ အဖေနှင့်အမေကို ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အရမ်းသတိရနေမိ၏ ။ ယာခင်းစပ်မှတဲလေးထဲမဝင်ခင် အောက်ပိုင်းရွာထဲမှ ကလေးတစ်သိုက် ဆော့နေတာကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ သူ့အမေ ရှိစဉ်တုန်းကတော့ ရွာထဲမှာ ရွယ်တူကလေးများနှင့် မျိုးစုံဆော့ခဲ့တာ အမေ သို့မဟုတ် အဖွား တစ်ယောက်ယောက် လိုက်ခေါ်မှ အိမ်ပြန်တတ်တာတွေ တွေးရင်း အမေ့ကို တမ်းတနေမိသည်။“သားရယ် ဆော့ချင်ရင်သွားဆော့ပါလား” သူဘယ်လောက်ထိ အတွေးထဲ နစ်နေမှန်းမသိ နောက်ဖက်မှ အဖွားအသံကြားတော့ အသိပြန်ကပ်ကာ အဖွားကိုလှည့်ကြည့်မိ၏။ဖိုးချို အပြုံးနှင့် ခါလိုက်သော ခေါင်း အဓိပ္ပာယ်ကို အဖွား နားလည်နိုင်လောက်မှာပါ။ ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်း အဖွား တော်တော်လေး ကျသွားတာ သိသာလှသည်။သူ့စိတ်ထဲ အခုလကုန်ရင် ကိုကြီး စိုင်းပိ စိုက်ထားတဲ့ငွေ ပြန်ဆပ်ဖို့ ပြည့်မှပြည့်ပါ့မလား ဟူသည့်အတွေးက ကြီးစိုးနေသည်။ အရင် ၂ပတ်က အဖွားအတော်လေးနေမကောင်းဖြစ်လို့ ကိုကြီးစိုင်းပိ ဆေးခန်းပြခ ဆေးဖိုးခတွေ စိုက်ထားပေးတာ နဲတာမှမဟုတ်တာ။ ဒီအတိုင်း ဗုဒ္ဓေါ ဆေးနေလို့ကလဲ အသေးအမွှား ကျောက်လေးတွေကလွဲလို့ ကျောက်ကောင်းကောင်း ပွင့်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်မှန်း မိုးကုတ်မှာ ကြီးလာတဲ့သူတိုင်း သိနေတာပဲ။အပြင်မှာ တွင်းသားလိုက်လုပ်ရအောင်ကလဲ သူက ကလေးသာသာ ဆိုတော့ ဘယ်သူကခေါ်မှာလဲ။ အဖွားကို တွဲခေါ်ပြီး တဲလေးဆီပြန်တော့ နေရောင်က ပြပြလေးသာ ရှိတော့သည်။......အေးစိမ့်နေသောလေက ဝါးကပ်လေးထောင်ကာထားသော တဲအပေါက်ဝဆီမှ တိုးဝင်လာနေသည်။ ထင်းမြစ်ဆုံထည့်ထားသော တဲအလယ်မှ မီးပုံကတော့ အရှိန်မကျသေး။ ဖိုးချို ညဦးပိုင်းကတည်းက အတွေးများနှင့် ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်နိုင်။ မီးပုံတစ်ဖက်ခြမ်းမှ အဖွားကတော့ သောက်ထားသော ဆေးအရှိန်ကြောင့် နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်မောကျနေသည်။ ထုတ်တမ်းတွင်ချိတ်ဆွဲထားသော ရေနံဆီမီးအိမ်လေး၏ မှိန်ပြပြ မီးရောင်အောက်တွင် ထထိုင်လိုက် ပြန်အိပ်လိုက် နှင့် စိတ်ကမတင်မကျ ဖြစ်နေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ ထထိုင်လိုက်သည်။ ဂုန်နီအိပ်တွေကို ထပ်ပြီး ချုပ်ထားတဲ့ ချုံစောင်ကြားထဲ လက်နိုက်ပြီး မကြာခန အဖွားမသိအောင်ခိုးကြည့်ရသော အဖေနဲ့အမေ တွဲရက် ဓါတ်ပုံလေး ထုတ်လိုက်သည်။တညက အမေ့ပုံလေး သူထုတ်ကြည့်နေတုန်း အဖွားအိပ်ရာအနိုးနှင့် သွားတိုးတော့ အဖွားက ဓာတ်ပုံကို ဒေါသတကြီး ဆုတ်ဖြဲရင်း သုံးလေးရက် သူ့ကိုစကားမပြောတော့။ သူ အဖေနဲ့အမေ ပုံကိုကြည့်ရင်း မျက်ရည်ဝဲလာသည်။“သား အရမ်းလွမ်းတာပဲ မေမေရယ်...သားဆီဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ...”အရွယ်က သိတတ်လာတော့ အဖေ တွင်းပိပြီးဆုံးတာ သူလက်ခံတတ်လာပေမဲ့ အမေ ဆိုတာ အသက်ရှင်ရက်ရှိနေသေးမှန်း သူသိနေသည်။ အမေရှိစဉ်က အဖေကိုမျှော်သော ကမ်းပါးရံလေးက အမေပြန်အလာကို မျှော်စရာအဖြစ်အစားထိုး နေရာယူခဲ့သည်။“အင်းဟင်း...ဟင်း.. ” အဖွားဆီမှ အိပ်နေရင်း ညည်းသံကြောင့် ကြည့်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကို ပြန်ဖွက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ ခြုံထားသည့် ဂုန်နီအိပ်စောင်ကို အဖွားပေါ် ထပ်ခြုံပေးရင်း တဲအပြင်ဖက် ထွက်လိုက်၏။တမောင်းမောင်းကျနေသော နှင်းတို့က သူ့မျက်နှာကို ကျင်ကနဲနေအောင် ဖြတ်ရိုက်လိုက်သည်။ တဲဘေးနားက မြွေရေခွံအိပ်တလုံး ကောက်ယူရင်း တောင်တက်လမ်းဖက် ထွက်ခဲ့သည်။.........ပ်ိတ်နေအောင်ကျနေသာ နှင်းထုက ရှေ့ဖက်ခြေ လေးငါးလှမ်းစာထက် ပိုမမြင်ရ။ ယဉ်ပါးနေကျလမ်း ဖြစ်၍သာ သူ ဆက်သွားနေနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။“အဲဒီ အစိုးရပိုင်လုပ်ကွက်က ကျောက်အရမ်းထွက်တာပဲ...ပြီးခဲ့တက်အပတ်ကလဲ ၁၀ ကလပ်(ကာရက်)ကျော် ၆ပွင့်တောင်ထွက်သွားတယ်”တနေ့က ဗုဒ္ဓေါဆေးရင်း ရွာထဲက လီရှောလေး ဘာသာရပ်(လီရှောနံမည်) ပြောစကား သူ့  နားထဲပြန်ကြားနေမိသည်။ လက်နက်ကိုင် အစောင့်တွေရှိတဲ့ လုပ်ကွက်ထဲ အမှန်က သူမသွားချင် ၊ မသွားရဲပါ...။ ခက်တာက တနေ့တခြား ပိုဆိုးလာတဲ့ အဖွားအခြေအနေက ဆေးခန်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးရုံဖြစ်ဖြစ် ပြမှဖြစ်တော့မည်။ ကိုကြီးစိုင်းပိကလဲ သပိတ်ကျင်းဖက် မျောသစ်နှင့် မီးသွေး သွားတိုက်ရင်း သပိတ်ကျင်းမှာ ငှက်ဖျားမိပြီး ဆေးရုံတင်ထားရသည်ဟု သိရသည်။“သေချင်ရင် စိန်မစားနဲ့ ကင်း၊ ကပိုင် ကိုသွား..အဲတာမှမသေသေး ဝါးဖြူတောင်ကိုပြေး” ဆိုတဲ့ အရပ်စကား အရ ငှက်ဖျားကြမ်းတဲ့ဒေသ ဝါးဖြူတောင်ဆိုတာ သပိတ်ကျင်းနယ်ထဲက ရွှေတောတခုဖြစ်သည်။သူ့ကို သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ ကိုကြီးစိုင်းပိ မြန်မြန် သက်သာလာပါစေဟုဆုတောင်းမိသည်။သူ အတွေးတသီတတန်းနှင့် တောင်ပေါ်ဖက်ပိုင်း တက်လာရင်း လူသွားလမ်းမှ ခွဲထွက်ကာ တောင်ကမ်းပါးဖက် တိုးတက်ခဲ့သည်။ စိန်နားပန် ပန်းချုံတွေ တိုးဝှေ့ရင်း တက်လာတာ အစိုးရလုပ်ကွက် မြောတိုက်တဲ့ တောင်ထိပ်ဖက် သူရောက်လာပြီ။ တောင်ကမ်းပါးနံရံကို ရေပန်းရိုက်ထားတဲ့ အသံကို ကြားနေရသည်။ မနေ့ကညနေ အလုပ်သိမ်းကတည်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဗြုံးတွေ ခုလောက်ဆို တော်တော် ကြေနေလောက်ရောပေါ့။ လုပ်ကွက်ထိပ်ပိုင်းမှာ သူထိုင်ချလိုက်ရင်း အခြေအနေ ကြည့်လိုက်၏။ သုည နား ကပ်နေသော ရာသီဥတုအောက်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်က တိတ်ဆိတ်နေသည်။ စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်လာတဲ့ ပါးပြင်ကို ပွတ်မိတော့ သွေးစလေးတွေ လက်ခုံမှာကပ်ပါလာသည်။ စိန်နားပန်ဆူးတွေ ခြစ်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ဗြုံးခွက်ကို လှမ်းမြင်နေရတဲ့ တဖက်ကမ်းပါးထိပ်မှာ မီးရောင်သဲ့သဲ့ကို ပိတ်နေသော နှင်းထုကြားမှာ တချက်တချက် လှမ်းမြင်နေရ၏။ အစောင့်ကင်းတဲမှ မီးရောင်ဖြစ်မည်။ဒီလောက် နှင်းတွေကျနေတာ မမြင်လောက်ပါဘူး ဟု အားတင်းရင်း ဗြုံးခွက်ရှိရာ ဖင်တရွတ်တိုက် လျောဆင်းလိုက်သည်။လုပ်ကွက်လျိုထဲ အရောက် ကမ်းပါးရံဗြုံးကျောကို ရိုက်ထားတဲ့ရေပန်းက ရေတွေကို ဘယ်လိုမှရှောင်မရ။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မေးရိုက်သံ တဂတ်ဂတ်ပေါ်လာသည်။ ရေနူးနေသော ဗြုံးတွေထဲ နင်းချလိုက်တော့ စစ်ကနဲ ခြေဖဝါးက နာသွားသည်။ မုကျောက်ရှသွားပြီဟုသိလိုက်သည်၊ မတတ်နိုင်။ မြင်မှမမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စ ဟု ဖြေတွေးလိုက်သည်။ (မုကျောက်=ငုကျောက်၊ ကြီးကြီးသေးသေး ဆနွင်းမကင်း ပုံအသွားထက်သော စောင်းများပါသည့် ကျောက်ဖြူ)မြွေရေခွံအိပ်ထဲ ဇလုပ်ခွက်မှ သဲဖတ်တွေ အမြန်ဆုံး ကျုံးထည့်သည်။ ထုံကျင်လာသောခြေလက်တွေထက် စိုးရိမ်စိတ်က အသက်ရူပိုကျပ်လာသည်။အိတ်ပြည့်တော့ အိတ်အဝ စုချည်းပြီး ပခုံးပေါ် တင်လိုက်သည်။ အိတ်က ကြွမတက်လာ။ သူအိတ်ထဲမှ ဗြုံးတစ်ဝက်လောက် ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး ထမ်းတာတောင် တော်တော်အားစိုက်မှ ပခုံးပေါ် ရောက်တော့၏။ အဆင်းတုန်းက လျောဆင်းလိုက်ရုံ ကမ်းပါးရံက ပြန်အတက်မှာ အိတ်ပါပါနေသဖြင့် တော်တော် တက်ယူရသည်။ ခဏခဏ လဲနေသဖြင့် စိန်နားပန်ဆူးချုံတွေနဲ့ မကြာခဏ ခြစ်မိသည်။ အကာအကွယ်မဲ့ ခြေလက်မျက်နှာတွေ ခြစ်ရာစင်းကြောင်း တွေ ကြည့်မကောင်းအောင် ပြည့်နေသည်။ ကမ်းပါးထိပ်ရောက်တော့ သူ အတော့ကိုမောနေပြီ။ အထုတ်ဘေးချပြီး ထိုင်ရုံရှိသေး “ဖေါင်း”ကနဲ ဂျီတူး သေနပ်သံက သူ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ရွှီကနဲ ဖြတ်ပြေးသွားသည်။ ရမ်းပစ်တာလား ခြောက်ပစ်တာလား သူမစဉ်းစားနိုင် အထုတ်ထမ်းရင်း ဆူးခြုံတွေကြား တိုးကာ အိမ်ဖက် အမြန်ပြန်လာခဲ့သည်။...........ကိုကြီးစိုင်းပိ ယူလာသော မုန်ညင်းပေါင်းကို ယူလိုက်ရင်း ဖလင်ဘူးလေးထဲမှ ကျောက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်။“ကိုကြီးပြန်အလာစာင့်နေတာ...ကျနော်ရထားတာ တပတ်ကျော်ပြီ” ကိုကြီးစိုင်းပိ မီးပုံဘေးဝင်ထိုင်ရင်း သူပေးလိုက်တဲ့ ကျောက်ကို ယူကြည့်သည်။ တဲအပြင်ဖက် ထွက်ကာ ပနာ(နေရောင်) အောက်မှာ ကျောက်ကို သေချာကြည့်ရင်း“ဖိုးချို ခဏလာဦး”“ဟုတ်” ဟု ဖြေရင်း သူပါတဲအပြင်ဖက် ထွက်လိုက်သည်။ ထော့နဲ့နဲ့ သူ လမ်းလျောက်ပုံကို ကြည့်ရင်း ကိုကြီးစိုင်းပိ မမေးခင် “မုကျောက်ရှတာပါ” ဟုသူဖြေလိုက်သည်။အပြင်ဖက်က အလင်းရောင်အောက်မှာ ဒဏ်ရာတွေနှင့် ပြည့်နှက်နေသော ဖိုးချိုမျက်နှာက အစင်းကြောင်းတေ မြင်တော့ ကိုကြီးစိုင်းပီ လက်နှင့်ညင်သာစွာ ပွတ်ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းချသည်။“ကံဆိုးလိုက်တာ ဖိုးချိုရယ်”သူ ဘာမှ ပြန်မပြောမိ။ ကံဆိုးကံကောင်းဆိုတာ သူ့အတွက် ခွဲခြမ်းနေနိုင်တဲ့ အရာ၊ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ အရာမဟုတ်မှန်း သူသိထားတာပဲ။“မင်းကျောက်က အပေါ်မှာ ဥဿဖယားဂျိုးတွေ အုပ်နေတာ..။ ကြိုးကတော့ဂေါ်ကြိုး..။ အမြင်အတိုင်းရောင်းရင် ဈေးသိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး”“ခွဲလိုက်လို့ အာလုံးပဲ့သွားရင်လဲ အလကား ဖြစ်သွားမယ်...။ အဆင်ပြေသွားရင်တော့ သိန်းကျောက်ပဲ...။ မင်းဘာလုပ်မလဲ””ကိုကြီးသဘောလေ..၊ ကျနော်မှနားမလည်တာ”“အင်း..ဒါဆိုခဏစောင့်။ ကိုကြီး ကျောက်ညှပ်တဲ့ ကွမ်းညှပ်သွားငှားလိုက်မယ်..။ ရော့.. ကျောက်ခဏပြန်သိမ်းထား”သူ့လက်ထဲ ကျောက်ပြန်ထည့်ပေးပြီး ကိုကြီးစိုင်းပိ ရွာထဲဖက် ဆင်းသွားသည်။သူ့စိတ်ထဲ ဒီကျောက်လေး အောင်ပါစေ ဟုသာ ဆုတောင်းနေမိသည်။ အိပ်ရာထဲ လဲနေသော အဖွားအတွက် ဆေးမဝယ်နိုင်တာလဲ အတော်ကြာပြီ။ သူလဲ ခြေထောက်က ဟက်တက်ကွဲနေတဲ့ အနာကြောင့် ဗုဒ္ဓေါဆေးဖို့ နေနေသာသာ လမ်းပင် အားတင်း လျောက်နေရသည်။ ကိုကြီးစိုင်းပိ ယူလာသောမုန်ညင်းပေါင်း ကို ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး အိပ်ရာမှနိုးလာသော အဖွားကို သူခွံ့ကြွေးနေစဉ် ကိုကြီးစိုင်းပိ ပြန်ရောက်လာသည်။“အဖွားသက်သာလား” ကိုကြီးစိုင်းပိက အဖွားဘေးမှာဝင်ထိုင်ရင်း မေးလိုက်သည်။“သက်သာပါဘူး ကွယ်... ငါ့မြေးလေးလဲ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ပင်ပန်းနေလိုက်တာ ငါကလဲ ဝန်ထုပ်ပိုဆင့်ပေးနေသလို ပါပဲ”“ဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်မလဲအဖွားရယ်...ဖိုးချိုအတွက် အဖွားပဲတွယ်တာစရာရှိတာကိုး”“ငါ့မြေးလေး ပင်ပန်းလို့ ဘယ်လောက် ပိန်သွားသလဲ ကြည့်ပါလား”အဖွားနှင့်ကိုကြီးစိုင်းပိ အချီအချပြောနေစဉ် သူအမေ့ကို အရမ်းသတိရ နေမိသည်။ အမေသာ အနားမှာရှိရင် သူ ဒီလောက်ပင်ပန်းပါ့မလား။“ ကဲ ဖိုးချို ကျောက်ဂျိုးဖတ်ခွာကြည့်ရအောင်”သူပေးလိုက်သော ကျောက်ကို ကျောက်ကြည့်သည့် ဓါတ်မီးလေးနှင့် သေချာထိုးကြည့်ပြီး ကွမ်းညှပ်နှင့် သေချာ ညှပ်ထုတ်နေသည်။ ဖိုးချို ကိုကြီးမျက်နှာသာ ကြည့်နေမိ၏။“အာ...ဖိုးချို မင်းတော့ထောပြ.ီ... အနဲဆုံး သိန်းလေးကျောက်ပဲ”“ဟုတ်လားကိုကြီး.. ဒါဆို အဖွားကို ဆေးကောင်းကောင်း ကုနိုင်ပြီပေါ့”ဖိုးချိုပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း...။ မန်းဝင်နေသောသူ့ခြေထောက်မှ အနာကိုလဲ ဆေးခန်းပြနိုင်တော့မည်။“နက်ဖန် ထာပွဲမှာ ကိုကြီးသွားရောင်းပေးမယ်.. ဟုတ်လား.. ။ ကဲ အဖွားရေ..ကျနော်ပြန်လိုက်ဦးမယ်..”အဖွား ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တော့ ကိုကြီးစိုင်းပီ ထိုင်ရာမှထလိုက်သည်။ သူ တဲအဝလိုက်ပို့တော့ သူ့ထော့နေသော ခြေထောက်ကို ကိုကြီးစိုင်းပီ ငုံ့ကြည့်ရင်း“မင်းခြေထောက်လဲ ညနေကျ ဆေးခန်းသွားပြလိုက်ဦး”“ဟုတ်၊ ကိုကြီး” ဟုသူပြန်ပြောတော့ ကိုကြီးစိုင်းပိကသူ့အိပ်ထဲမှ ရာတန် ၂ရွက်ထုတ်ပေးသည်။ဆေးခန်းပြဖို့ထက် အိမ်မှာဆန်မရှိတော့တာ သူမပြောဖြစ်တော့။................ညနေစောင်းရဲ့ အလင်းရောင်အောက်မှာ မြင်နေရတဲ့ ရွာလမ်းလေးကို ဖိုးချို သည်နေရာမှ ထိုင်ကြည့်နေသည်မှာ အတော်ကြာပြီ...။ ဖိုးချို ကျောက်ဆေးမထွက်တာ ၂ပတ်ကျော်ကြာပြီ။ ပိုးဝင်သွားသော ခြေထောက်က ဆေးခန်းပြ အတော်ကို နောက်ကျခဲ့သောကြောင့် ခုထက်ထိ ကောင်းကောင်းမထောက်နိုင်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပွင့်ထားသောကျောက်ကြောင့် လတ်တလော ပူစရာမလိုတော့။ ခက်တာက အဖွားကျန်းမာရေးက ထူးခြားပြီး ကောင်းမလာခြင်းဖြစ်သည်။ နေမကောင်းဖြစ်နေသော အဖွားအနားမှာ အချိန်ပြည့် နေချင်ပေမဲ့ ဒီလိုညနေစောင်းတိုင်း ဒီနေရာလေးမှာ အမေ့ကို သူ ငတ်မွတ်စွာ တမ်းတမျှော်နေမိသည်။ အမေ တနေ့ ပြန်လာမှာပဲ ဟု ခုထက်ထိ ထင်နေဆဲ။"“ဖိုးချိုရေ...ကျောက်သွားမဆေးဘူးလား”ကမ်းပါးရံ လမ်းကွေ့လေးအတိုင်း တက်လာသော ဘာသာရပ် က လက်ထဲမှ ဗုဒ္ဓေါ ကို ချပြီး သူ့ဘေးဝင်ထိုင်ကာ မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။“ခြေထောက်မှ မကောင်းသေးတာကွာ..။ ဆရာဝန်က ရေမထိရဘူးပြောထားတယ်”“ဟုတ်လား..၊ ငါ မင်းအိမ်ဝင်ခေါ်သေးတယ်..။ မင်းအဖွားက တောင်ပေါ်တက်သွားတယ် ဆိုလို့..။ ဒါနဲ့ မင်းအဖွားနားမှာ ဒေါ်ကြီးတယောက်တွေ့ခဲ့တယ်...။ မင်းအဖွားကတော့ ဒေါသတကြီး မောင်းထုတ်နေတာပဲ..။ အဲဒီမိန်းမကြီး မျက် နှာလဲ တော်တော် စိတ်မကောင်းတဲ့ပုံ ပေါ်နေတယ်”ဘာသာရပ် စကားကြောင့် ဖိုးချိုစိတ်ထဲ အမေ့ကို သတိရလာသည်။ အမေများဖြစ်နေမလား။ ဖိုးချို ထိုင်ရာမှ ရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်တော့ နာနေတဲ့ခြေထောက်ကိုအားပြုရက် ဖြစ်သွားသဖြင့် ဘာသာရပ် ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးထိန်းရပ်လိုက်ရသည်။“အဲဒီ မိန်းမကြီးဘယ်ဘက်ပါးမှာ .. ဟို.. စပါးတင်မှဲ့ပါလားဟင်”သူ သိချင်စိတ်က ဘာသာရပ်ကိုဆွဲထခိုင်းသလို ဖြစ်နေသည်။”ဘာလဲ စပါးတင်မှဲ့... ”ဘာသာရပ် က သူ့ကို မအူမလည် ပြန်ကြည့်နေတော့ သူပါးပေါ်ထောက်ပြပြီး ဒီနေရာက မှဲ့ကို ပြောတာ ဟု သူပြောလိုက်တော့ ဘာသာရပ်က“ အေး ပါတယ် ဟ ထင်ထင်ရှားရှားပဲ”ဘာသာရပ် စကားဆုံးတော့ သူ တောင်ဆင်းလမ်းအတိုင်း ရုတ်တရက် ပြေးဆင်းခဲ့သည်။ နာနေသော ခြေထောက်အနာက ဘယ်ဆီ လွင့်သွားမှန်းမသိ။ နောက်ဆုံးတော့ အမေ သူ့ဆီပြန်လာခဲ့ပြီပေါ့။ကုန်းဆင်းလမ်းအတိုင်း အမြန် ပြေးဆင်းလာသော ဖိုးချို နာနေသော ခြေထောက်က ကျောက်ခဲတခုရဲ့ စောင်းကို နင်းမိလိုက်ချိန်၊ နာလွန်းလို့ခြေကို ဖွလိုက်ချိန်၊ ပြေးဆင်းလာတဲ့အရှိန်ကို မထိမ်းနိုင်ပဲ ဒလိမ့်ကောက်ကွေး လိမ့်ဆင့်သွားသည်။ ခန္တာကိုယ်တခုလုံး နာကျင်ကိုက်ခဲနေသော်လည်း နှစ်အတော်ကြာ ဝေးနေခဲ့သော အမေ့ကိုသာ တမ်းတနေမိသည်။အမေရယ် သားကို အမြန်လာခေါ်ပါတော့ ။သားလေ အမေ့ရင်ခွင်ထဲမှာ မြန်မြန် နားခိုနေချင်လှပြီ။သားလေ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေဆိုတာ ဆုံးရူံးခဲ့ရပြီး အမေ့ရဲ့ ပစ်ထားခြင်းခံခဲ့ရတာပါ။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော သား အမေ့ကို သိပ်ချစ်တယ်။...........ဖိုးချို စိတ်တွေ အရမ်းကို ပျော်နေပြီး၊ အရမ်းကိုပေါ့ပါးနေသည်။ဖိုးချိုတို့ မြေးအဖွား နေသော ယာခင်းဘေးက တဲရှေ့မြေကွက်လပ်ကလေးမှာ အဖွားနဲ့အမေက ဖိုးချိုကို အပြုံးတွေနှင့် ဆီးကြိုနေကျသည်။ ပြေးလာသော ဖိုးချိုကို တဲနားမရောက်ခင် လူတစ်ယောက်က ပွေ့ပြီး ချီမြောက်လိုက်သည်။ သေချာကြည့်တော့မှ အဖေရယ်လေ..။ အဖေမှ အဖေအစစ်..။ သူအဖေ့ကို ဘယ်ညာပါးနှစ်ဖက် အားရပါးရနမ်းမိသည်။ အဖေ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စတွေ ရီးလေးခိုနေသည်။သူနဲ့အဖေ တဲဖက်က အမေ့ဆီ ပြေးလာတော့ ခါတိုင်း တိုက်မိလျှင် ညှိနေကျ စိန်နားပန်ဆူးတို့က စိုးစဉ်းမျှ ခြစ်ရာမဖြစ်သလို နာနေသော ခြေထောက်အောက်မှ အာလူးကျောက်(အာလူးပုံစံကျောက်ခဲ) တို့ကလည်းနူးညံ့လွန်းတဲ့ ဂွမ်းဖတ်လေးတွေလို...။ အဖေက သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး လမ်းကွေ့မှ ကာထားသော ခြံစည်းရိုးကို တည့်တည့် ဖြတ်ဝင်သွားတော့ သူပါရောပါသွားသည်။ မခုန်မကျော်ပဲ ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်လိုက်သလဲ သူမစဉ်းစားအားပေ..။ ရင်ထဲမှာ အမေ့ကိုလွမ်းလွန်းလို့ အမေ့ရင်ခွင်ထဲ ဝင်ပြီး ငိုချလိုက်ချင်တာပဲ သိတော့သည်...။သားလေ အမေ့ကို သိပ်ချစ်တယ်အမေ...။သားလေ..သားလေ...အမေ့ကို အရမ်းလွမ်း အရမ်းသတိရ နေတာ အမေသိရဲ့လား....ဟင်..။သားလေ...အမေ့ကို အ..ရမ်း....ချစ်..တယ်..အမေ...။ရေးသားသူ MTK________________________________အကို MTK ရဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတွေကို မိတ်ဆွေတို့ ရင်းနှီးနေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ "မိုးမိသွားသော ရေ နည်း ငါး " ဝတ္ထုတိုကလည်း အကို MTK ရေးထားတဲ့ မိုးကုတ်နောက်ခံ ဝတ္ထုတိုလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဝတ္ထုတိုလေးကို ကျွန်တော့်အိမ်ကလေးမှာ တင်ထားခွင့်ပေးတဲ့ အကို MTK ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးကုတ်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ဆက်လက်ဖတ်နိုင်အောင် “ထာပွဲမိုးကုတ်ကျောက်တွင်းမိုးကုတ်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို စကားဝါမြေ ကနေ ဒေါင်းယူ ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်။မေတ္တာဖြင့် မိုးကုတ်သား
အကိုမင်းသုခရေ...သုတ ရသ အကုန်ပါတဲ့ အရေးအသားအကွက်စိပ်တဲ့ တစ်ချက်မှ အိုင် ငိုင်သွားတာမျိုးမရှိပဲ.တရက်စပ်ပို့ပေးသွားတဲ့စကားပြေ အရေးအသားကောင်းမျိုးမို့လေးစားအားကျမိပါတယ်..။အကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာတွေ ဆက်ရေးပါ..။အကို့စာတွေကို စောင့်မျှော်လျက်ချစ်ခင်လေးစားစွာ
Very touching story! Thanks for sharing Ko Bo!
yup.. it is really touching... bravo!!!!!!
အရေးအသားကော ဇာတ်အိမ်လေးကော အရမ်းကြိုက်တယ် ဇာတ်သိမ်းလေးက ဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ကို ဖြစ်နေမိတယ်... မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ လူငယ်တယောက်ရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေက ရင်နာစရာကောင်းပါတယ်။ ပြန်တင်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လေးစားလျက်တောင်ပေါ်သား
စိတ်ဝင်စားစရာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျ...ရေးသားထားတာလည်း ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်...ဗဟုသုတရစရာအပြင် လူငယ်တယောက်ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်က အင်မတန်ပေါ်လွင်တယ်...
အလွမ်းတွေ ထည့်ဝှက်ထားတဲ့ နွေဦးလင်္ကာ
“တိတ်တဆိတ် အေးခဲစွာ သေဆုံးသွားသော နေ့ရက်များ”
“မျောက်စိတ်တို” မေးသော မိုးကုတ်သား (စနေသား) ရဲ့ “ခ...
Insomnia (by Craig David)